ကုန်းဆင်းတွင် | အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ
အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ကုန်းဆင်းတွင်
သင်တို့ရှေ့မှာ canoeing ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါဘူးလျှင်သင်တို့ကိုပြုမြင့်မြင့်အချိန်င်. အများအားဖြင့်, နူးလှေလှော်ကစားနည်းတစ်ခုခုကိုအပနျးဖွအဖြစ်နူးသို့မဟုတ်ယပ်လှေ paddling ပါဝငျကွောငျးလဟာပြင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်တစ်အားကစားအဖြစ်. နိူး canoeing သာသင့်ရဲ့ယပ်လှေသို့မဟုတ်နူးနှင့်လူ့ကြွက်သားအာဏာကိုမောင်းနှင်ရန်တစ်လျှောတစ်ခုကိုအလေးအနက်, ပိုပြီးဘာမှမ. တစ်ဦးကနူးနှင့်တစ်ဦးကယပ်လှေ propels လမျး၌ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်. တစ်ဦးကယပ်လှေမောင်းနှင်ရန်, တစျနှစျဦးဓါးသွားအဘယ်မှာရှိသနည်း paddler နှင့်အတူထိုင်အတူလှော်ကိုအသုံးပြုသည် ...
ကိုယ့်တောင်ကုန်းကိုငါ့ပြေးတို့အားပေးသောရလဒ်များကိုကိုချစ်. အဘယ်သူမျှမကအခြားလေ့ကျင့်ခန်းတောင်ကုန်းထက်ငါ့အပြေးဖို့ပိုပေးသည်. အစာရှောင်ခြင်း run ချင်တယ်, တချို့တောင်ကုန်းကို run. သင့်ရဲ့ခြေထောက်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုခငျြ, run တောင်ကုန်း. သင့်ရဲ့ပြေးစက်ပြင်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်စေချင်, run တောင်ကုန်း. သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းခိုင်မာခြင်းတိုးမြှင့်ဖို့ Want, တချို့တောင်ကုန်းကို run. အသွင်သဏ္ဌာန်အစာရှောငျရချင်, တချို့တောင်ကုန်းကို run. ငါအချိန်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအဘို့အတောင်ငယ်အပြေးရပ်တန့်သောအချိန်ငါနှေးကွေး run ဖို့စတင်. ငါအမြဲရပ်တန့်ဘာကြောင့်သေချာမရယ်. ဖြစ်နိုင် p ...
သင်မကြာခဏနှင်းလျှောစီးနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဓါတ်ကိုပြန်လည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဒါကြောင့်သင်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့လိုခငျြ? ငါသည်သင်တို့ကိုအချို့သောအကြံပေးချက်များပေးလိမ့်မယ်. သင်အချိန်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအဘို့နှင်းလျှောစီး downhill တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေသယ်, သင်တစ်ဦးတွေအများကြီးချွေးတစ်ဦးစိတ်သဘောထားရှိသည် - တစ်နာရီလျှင်ရေတစ်ကွတ်ထုတ်ယူပြီးမှတက် - သငျသညျခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်နေကြသောကြောင့်,. သငျသညျရငေတျရရှေ့တော်၌ထို key ကို hydrate ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, နေ့တစ်လျှောက်လုံးကိုမှန်မှန်မသောက်ရ. အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသင်တို့နှင့်အတူအရေအနည်းဆုံးနှစ်ကွတ်ထုတ်ယူသယ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ရေကိုအကောင်းဆုံး flui ဖြစ်ပါတယ် ...
ခန္ဓာဗေဒ snowboarding အမှုန့်-ဇုန်
တစ်ဦးက Kitewing ဆိုတာဘာလဲ?
သငျသညျ propably တစ်ဦးစွန်အရာကိုသိကျွမ်း, ဒါပေမယ့်သင်က Kitewing အကြောင်းကိုကြားရကြပြီ? The kitewing isalightweight hand'held wing shaped asakite that can be used for sailing on ice, skis တရံနှင့်အတူဆီးနှင်းနှင့်မြေယာ, စကိတ်စီးခြင်းဒါမှမဟုတ်နှင်းလျောစီး. ဤသည်ဆောင်းရာသီ၌ပြစ်မှားမိသည်ကို. နွေရာသီအသုံးပြုမှုအတွက်တဦးတည်းကြိတ်စက်ဓါးသွားကို အသုံးပြု. တောင်ပံနှင့်အတူရွက်လွှင့်လို့ရပါတယ်, တစ်ဦး mountainboard တစ်ခုသို့မဟုတ်စကိတ်စီး. I haven't yet made it in summer, ဒါပေမယ့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအသုံးပြုမှုအမှန်တကယ်အေးမြသည်. ငါအဓိကအား frosen ရေကန်များမှာစီး, but snow-covered open spa...
မာချူပီချူ Trekking: ထိုအင်ကာ Trail နှင့်အခြားခရီးလမ်းကြောင်းများ
တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်း ‘ ဂရိတ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပျော်စရာ
Mountain biking is becomingapopular sport. သို့သော်, before you take up this sport know the hazards and the safety equipment needed.
တောငျပျေါစက်ဘီးစီး Capital ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ ‘ ဆောင်းရာသီပန်းခြံ, ကော်လိုရာဒို
တစ်ဦးကတောင်တန်းစက်ဘီးစီး Choose လုပ်နည်း
The first thing to do before purchasingabicycle for any reason is to know what your primary riding is going to be. Most people initially purchaseadual use bike, something that can be ridden on road and off road. နောက်ဆုံးမှာ, when the bug bites big it'll be time to invest inabike that is all muscle for the mountains. One of the ways that mountain bikes differ from other bikes is that they have very strong, lightweight frames, multiple gears, powerful breaks and wide t...
သငျသညျ Biker ၏အဘယျပုံစံ Are?
နှင်းလျှောစီးအဘို့ off-ရာသီ conditional
တစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ဆိုင်ကယ်နှင့် Run ကိုစွန့်စားမှုပြိုင်ပွဲ
Dallas မြို့က Cowboys: အနိုင်ရရှိမှု၏တစ်ဦးကသမိုင်း
Beginners မ​​ျားအတွက်လျင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာတက္ကဆက်ပြည်နယ် Holdem Poker သင်ခန်းစာ
ပြိုင်ကား Dirt Bike
ဂေါက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အကြီးတန်းဂေါက်သီးသည်တစ်ဦးက Key ကိုစိတျအပိုငျး Is
Beginners မ​​ျားအတွက်ဂရိတ် – ငွေဖောင်းပွမှုစစ်-တွင်-ထိပ်တန်းကယပ်လှေ
အဆိုပါ Humminbird Matrix နှင့်အတူငါးအဆိုပါညာရာဌာနကိုရှာရန် 27
တစ်ဦးက Moore လှေဖုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများ
အဆိုပါ WSOP များအတွက်ငျြးမီရန်ကဘယ်လို
နယူးဘေ့စဘော Card များကိုကမ်းလှမ်းချက်ဂန္ထဝင်ရှားပါးစုဆောင်း
ထိပ်တန်း5အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဒဏ္ဍာရီ Skydiving
သင့်ရဲ့ဂေါက်သီး Swing Timing ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ဘယ်လို
လေထီးခုန်များအတွက် Altimeter နာရီ
ထူးအိမ်သင်မျက်နှာနှင့်ယာဉ်မောင်း – အဘယျသို့သငျ၏ Iron အကြောင်း?